၎င်းသည်မည်သို့ထုတ်လွှတ်သည်၊ မည်ကဲ့သို့အသုံးပြုသည်ဆိုသည်မှာ photovoltaic နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ဖြစ်သည်။ | အစိမ်းရောင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ
photovoltaic နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သည်မည်သည့်အရာထုတ်လုပ်သည်၊ မည်သို့အသုံးပြုသည်
TomàsBigordà | | Photovoltaic နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်
ကံမကောင်းစွာပဲ, ယနေ့အသုံးအများဆုံးစွမ်းအင်ဖြစ်ကြသည် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲမဟုတ်ပါအဆုံးသတ်တော့မည်ဖြစ်သောကမ္ဘာ၏အရင်းအမြစ်များမှလာသူများ။ ကျောက်မီးသွေး၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့သို့မဟုတ်ရေနံကဲ့သို့သောကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းအရင်းအမြစ်များသည်လူသားတို့အသုံးပြုသောအဓိကစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များဖြစ်သည်။
သို့သော်ထိုကဲ့သို့သောစွမ်းအင်အမျိုးအစားများရှိသည် လေ, ဇီဝလောင်စာ, ဘူမိအပူ အခြားသူများအကြား, ကံကောင်းတာကသူတို့သည်အခါတိုင်းပိုပြီးမြေပြင်ရရှိမှုနေကြသည်။ နောက်ပြီးငါတို့ကအကြောင်းပြောမယ် Photovoltaic နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်။ ဘာလဲ၊ အဲဒါကိုဘယ်လိုထုတ်လုပ်လိုက်တယ်၊ ဘာလုပ်ငန်းသုံးရှိတယ်။
1 PHOTOVOLTAIC စွမ်းအင်ဆိုတာဘာလဲ။
La နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကို ၎င်းသည်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရန်နေရောင်ခြည်အမှုန်များ၏ဓါတ်ရောင်ခြည်ကိုအသုံးချခြင်းဖြစ်သည်။ အဲဒါက လုံးဝသန့်ရှင်းသောစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်ဓာတုဓာတ်ပြုမှုများအသုံးပြုရန်မလိုအပ်ပါ (သို့) စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတစ်ခုခုကိုဖြစ်စေသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ နေ၏စွမ်းအင်သည် (သို့) အနည်းဆုံးဘီလီယံနှစ်ပေါင်းများစွာကြာရှည်စွာတည်ရှိနေလိမ့်မည်။ တိုတိုပြောရရင်ဒါဟာ သန့်ရှင်းသော၊။ ပြီးတော့ကြီးမားတဲ့မေးခွန်းကတော့ဘာကြောင့်အဲဒါကိုပိုပြီးထည့်သွင်းမပေးရတာလဲ။ လူ့အရာ (လော်ဘီ) ။
ငါတို့ပြောသကဲ့သို့ Photovoltaic နေရောင်ခြည်စွမ်းအင် ၎င်းသည်နေ၏စွမ်းအင်ကိုလျှပ်စစ်စွမ်းအင်အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးသောတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်ဤပြောင်းလဲမှုသည်မည်သို့ဖြစ်လာသနည်း။ ဘယ်လို photovoltaic နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကိုထုတ်ပေးသလဲ?
La Photovoltaic နေရောင်ခြည်စွမ်းအင် သောနိယာမအပေါ်အခြေခံသည် စွမ်းအား အလင်းအမှုန်တွင်ပါရှိသော ( ဖိုတွန်) ကူးပြောင်းနိုင်ပါတယ် လျှပ်စစ်မီး။ ဤသည်ကိုခေါ်မှတဆင့်အောင်မြင်သည် photovoltaic ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုကျနော်တို့နောက်ပိုင်းမှာကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပါလိမ့်မယ်။
ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပြောရရင်၊ ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီရည်ရွယ်ချက်အတွက်အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့်ကိရိယာကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ဖြစ်သည် လျှပ်စစ်မီး ကျေးဇူးတင်ပါတယ် photoelectric အကျိုးသက်ရောက်မှု နေရောင်ခြည်၏။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဤစက်ပစ္စည်းများတွင် semiconductor ၏သတ္တုသတ္တုပြားများပါဝင်ပြီး၎င်းကိုနာမည်ပေးသည် photovoltaic ဆဲလ်သို့မဟုတ်ပန်းကန်.
ဒီ၏ရလဒ်အဖြစ် photovoltaic ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်စဉ်ကို, ရရှိသောဖြစ်ပါတယ် စွမ်းအား အနိမ့် voltages ကိုမှာ (380 နှင့် 800 V ကိုအကြား) နှင့်တိုက်ရိုက်လက်ရှိ၌တည်၏။ နောက်ပိုင်းaရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ အဲဒါကိုအသွင်ပြောင်းဖို့ AC အ.
ဤ photovoltaic ဆဲလ်များတည်ရှိရာ devices တွေကိုဟုခေါ်ကြသည် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင် တစ်ကိုယ်ရေနှင့်မိသားစုအသုံးပြုရန်အတွက်သူတို့သည်စျေးနှုန်းသည်ယူရို ၇၀၀၀ ဝန်းကျင် (စျေးနှုန်းများကျဆင်း။ ကျဆင်းနေသော်လည်း) ရှိသည်။ ထို့အပြင်၊ ဤတပ်ဆင်မှုများသည်၎င်းတို့တွင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလုံးဝမလိုအပ်သည့်အားသာချက်ရှိသည်။ အကယ်၍ သင်သည်သူတို့၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးမြှင့်လိုပါက၎င်းတို့ကိုမှန်ကန်သောနေရာ (နေနာရီများစွာရှိသောနေရာ) နှင့်သင့်လျော်သောနေရာချထားမှုနှင့်တိမ်းညွတ်မှုတို့ဖြင့်တပ်ဆင်ရမည်။
photovoltaic နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုဒီဂရီ ၎င်းသည်ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကဲ့သို့သောအရင်းအမြစ်များထက်များစွာလျော့နည်းသည်၊ ၎င်းသည်လေစွမ်းအင်နှင့် (တူညီသောပထ ၀ ီနယ်မြေပေါ် မူတည်၍) အသုံးပြုသောတူညီသောအဆင့်တွင် ပို၍ နည်းသည်။ သို့သော်၎င်းင်း၏အသုံးပြုမှုများတိုးများလာနေပြီးနောက်လာမည့်အခန်းတွင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းအလွန်ကွဲပြားခြားနားသောနေရာများတွင်အသုံးပြုထားသည်။
photovoltaic နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကိုအဓိကအသုံးပြုမှုသည်၎င်းစွမ်းအင်ကိုနေမှလျှပ်စစ်စွမ်းအင်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပေးနိုင်သည့်စွမ်းရည်နှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ဒီအဓိပ္ပာယ်မှာ, ကွဲပြားခြားနားသောအသုံးပြုမှုပုံစံများကိုရှိပါတယ်။ တစ်ဖက်တွင်၎င်းကိုရောင်းချသောစွမ်းအင်အမြောက်အများကိုဖန်တီးရန်အသုံးပြုနိုင်သည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထောက်ပံ့ရေးကုမ္ပဏီများမှ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်လည်း၎င်းကိုတစ် ဦး ချင်းဖြစ်စေ၊ မိသားစုနှင့်ဖြစ်စေအသုံးပြုနိုင်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာအိမ်တွင်စွမ်းအင်ထောက်ပံ့ရန်ဖြစ်သည်။ လူအများစုကနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကိုအခြားစွမ်းအင်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုရန်အိမ်ခေါင်မိုးပေါ်တွင်ဆိုလာပြားများကိုတပ်ဆင်ကြသည်။
photovoltaic နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ရရှိနိုင်သောအဓိကအသုံးပြုမှုတစ်ခုမှာ၎င်းတွင်စွမ်းအင်ကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်ခြင်းဖြစ်သည် ရောက်ရှိရန်ခက်ခဲသောဆိုဒ်များ သို့မဟုတ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိရန်အခက်အခဲရှိပါကလျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းများမရရှိနိုင်သောဖွံ့ဖြိုးမှုညွှန်းကိန်းနိမ့်သောနေရာများဖြစ်သည်။
အလားတူစွာနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သည်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရာတွင်အဓိကနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည် ဂြိုဟ်တုများ အာကာသအတွင်းပတ်လမ်းထဲမှာရှိကြ၏။ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကိုအာကာသထဲမှရရှိသောစွမ်းအင်ကိုရယူရန်၎င်းတို့၏ဖွဲ့စည်းပုံတွင်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးပြားများတပ်ဆင်ထားသောဤဂြိုဟ်တုများ၏ပုံရိပ်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားလုံးမြင်တွေ့ခဲ့ရသည်မှာသေချာသည်။
ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်သည် စပ်ထုတ်လုပ်မှုစနစ်များ စွမ်းအင် (ဆိုလိုသည်မှာဆိုလာစွမ်းအင်ကိုလေနှင့်အတူပေါင်းစပ်အသုံးပြုသော) သို့မဟုတ်နေစွမ်းအင်သည်ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းအရင်းအမြစ်များနှင့်ပေါင်းစပ်သောအရာများဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်လူအများစုက၎င်းကိုမသိသော်လည်း photovoltaic နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သည်အလုပ်လုပ်သည် အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောဒေသများတွင်အသုံးပြုသောစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရန်: မိုဘိုင်းတယ်လီဖုန်း။ ရေဒီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားပြန်လုပ်စက်များ၊ လမ်း SOS တိုင်များ၊ အဝေးထိန်းခလုတ်၊ ဆည်မြောင်းကွန်ယက်များအဝေးထိန်းထိန်းချုပ်မှု၊ telemetry၊ ရေဒါများ၊
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အစိမ်းရောင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ » ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောစွမ်းအင် » Photovoltaic နေရောင်ခြည်စွမ်းအင် » photovoltaic နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သည်မည်သည့်အရာထုတ်လုပ်သည်၊ မည်သို့အသုံးပြုသည်
ဘာစီလိုနာသည်နှစ် ၂၀ ကျော်မော်တော်ယာဉ်များစီးဆင်းမှုကိုတားမြစ်လိမ့်မည်